महालक्ष्मी विकास बैंक अब तनहुको दमौलीमा
Wednesday,5Dec, 2018 3:15 PM
१९ मंसिर, काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले देशभर शाखा विस्तार गर्ने क्रममा मंसिर १९ गते तनहुँमा पनि शाखा खोलेको छ । दमौली शाखाको उद्धघाटन व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले गरेका थिए ।
उद्धघाटन कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी भरत कुमार शर्माको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक शिद्ध विक्रम शाह , तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठ लगायत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, व्यास नगरपालिकाका प्रतिनिधि, दमौली बजार ईकाइ समितिका प्रतिनिधि, समाजसेवी, पत्रकार महासंघ तनहुँका प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा अन्य स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो । अतिथिहरुले शुभकामना दिदै शाखाको उत्तरोत्तर प्रगतीको कामना गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना ग्राहकको आवश्यकतालाई उल्लेख्य रुपमा सम्बोधन गर्दै आएको बताए । देशका विभिन्न स्थानमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी सहज, सुलभ र विश्वसनीय बैकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरे ।
हालसम्म बैंकले ८५ वटा शाखा तथा ३५ वटा एटिएममार्फत बैंकिङ्ग सेवा दिदै आएको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी रु. २ अर्ब ८४ करोड रहको छ भने बैंकले हालसम्म करिब रु. २७ अर्ब ४ करोड निक्षेप संकलन गरी रु. २४ अर्ब ४१ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।